Halkan ka ogoow dalalka ugu qashinka badan iyo kuwa ugu yar | Warmaalnews.com
Adduunka waxaa uu soo saara qashin gaarayo balaayin tan sannad kasta , qashinkan ayaa waxaa uu dabooli karaa 800,000 km oo goobood oo lagu dabaasho.
Mareykanka waxaa uu soo saara saddex jibaar qashinka dunida oo ay kamid yihiin bacda iyo cuntooyiinka haraadiga ah.
Marka ay timaaddo dib u habaynta qashinka Mareykanka waxaa uu kamid yahay dalalka ugu liita ee aanan wax horumar ah ka sameyn arrintaas, waxaa uu boqolkiiba 35% uu dib usoo celiyaa waxyaabaha qashinka ah ee la qubay.
Jarmalka ayaa lagu amaanay dib u habeynta qashinka si dib loogu isticmaalo, boqolkiiba 68% waxaa uu dib suuqa ugu soo celiyaa qashinka isaga oo ah alaabo manaafacaad u leh dadka.
Daraasaddan waxaa sameysay Verisk Maplecroft oo ah shirkad sahan ku sameysa dhibaatooyinka dunida ka taagan.
Waxay daraasaddan diiradda ku saareysaa qashinka iyo sida dib loogu celin karo suuqyada, waxay kusoo begmeysaa xilli caalamka uu la daala dhacayo dhibaatooyinka qashinka iyo bacda ay ku reebeen deegaanka.
Image captionQashinka oo dhibaata ku hayo dunida
Dowladaha hoose ayaa qashinka kasoo daabulaa guryaha, xarumaha dowladda iyo goobaha ganacsiga.
Adduunka waxaa sannad kasta uu soo saara qashin gaaraya 2.1 bilyan oo tan, boqolkiiba 16% waxaa dib loo soo celiyaa qashinka si dib loogu adeegsado halka boqolkiiba 46% la qubo.
Qashinka ay daadiyaan bulshada Mareykanka waxaa uu saddex jeer ka badan yahay midka Shiinaha iyo sidoo kale waxaa uu toddobo jeer ka badan yahay qashinka ay qubaan shacabka Itoobiya.
“Qashin badan oo Mareykanka ka yimaado hadda looma daabuli karo Shiinaha, dab ayaa la qabadsiiyay, mana jirto dadaal ama dhaqaale looga hortaggayo dhibaatadan” ayuu yiri Will Nichols, oo ah madaxa daraasadda.
Mamnuucitaanka qashinkii loo daabuli jiray Shiinaha,Thailand, Vietnam iyo Malaysia ayaa waxay isbaddal ku reebeen caalamka, waxaa jiraa xiisad u dhexeysa Philippines iyo Canada kaddib markii Philippines ay dib u celisay Kanada 69 maraakib ah oo siday qashin ah.
“Dalalka Aasiya ma doonayaan inay noqdaan meel lagu qubo qashinka caalamka” ayuu yiri Will Nichols.
Image captionWasakhda hawada
“Waxaa jiraa dad ku jira nolosha dabaqadda dhexe ,kumana faraxsano heerka wasakhda iyo qashinkaas, Shiinaha waxaa uu leeyahay siyaasad uu ka hortaggi karo dhibaatadan”
Warbixinta waxay soo jeedineysaa in waddamada dunida ay ciribtiraan qashinka isla markaasna ay ka hortaggaan wasakheynta deegaanka.